तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्याकेज २ मा एक अर्ब खर्च - नेपालबहस
| ७:५५:१७ मा प्रकाशित
८ दमौली, माघ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गत करिब रु एक अर्ब खर्च भएको छ । सो प्याकेजअन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले काम गरिरहेको छ ।
उक्त प्याकेजअन्तर्गत सिनोले सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडानको ठेक्का पाएको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले सिनो हाइड्रोसँग रु ११ करोड ४१ लाख ८९ हजार र रु तीन अर्ब ८३ करोड १४ लाख ‘मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक’मा खरिद सम्झौता गरेको थियो ।
सोअनुसार हालसम्म रु दुई करोड ३१ लाख र रु ९५ करोड खर्च भएको जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विदेशी मुद्रातर्फ २०.२३ प्रतिशत र नेपाली मुद्रातर्फ २५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । सो प्याकेजअन्तर्गतको कामका लागि तनहुँ हाइड्रोले सन् २०१८ अक्टोबरमा सिनोसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताको म्याद सन् २०२४ सेप्टेम्बर २९ सम्म रहेको छ ।
प्याकेज ३ अन्तर्गतको कामका लागि केइसिसँग सन् २०१८ डिसेम्बर २५ मा सम्झौता भएको थियो भने सम्झौताको म्याद सन् २०२१ मार्च २० सम्म रहेको छ । यसका लागि हाइड्रोले रु छ करोड र रु २१ करोड ‘मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक’ सम्झौता गरेको थियो । त्यसबमोजिम विदेशी मुद्रातर्फ ५२ प्रतिशत र नेपालीतर्फ १२.६१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तनहुँ र चितवनतर्फका वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान हुनेछन् । तनहँुतर्फ ३० हेक्टर वन क्षेत्रका रुख कटान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि फाइल वन विभागमा पठाइएको छ । दमौलीदेखि भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । चालु आवमा प्रसारण लाइनका लागि ३० वटा टावर निर्माण गरिने छन् ।
सांसदहरुलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन् सर्कुलर भर्खरै
वैदेशिक रोजगारी छाडेर च्याउ खेतीमा युवा ४ मिनेट पहिले
म्यान्मारका विदेशमन्त्री आसिएनका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी ५ मिनेट पहिले
अफगानिस्तानमा पत्रकार, अधिकारकर्मी र राजनीतिक व्यक्ति आक्रमणको निशानामा ७ मिनेट पहिले
अमेरिकी सेना रहेको इराकी अखडामा १० रकेट प्रहार ९ मिनेट पहिले
ब्राजिलमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना बाट एक हजारको मृत्यु १० मिनेट पहिले
खेर गएको जमीनबाट करोडौं आम्दानी हुदै १५ मिनेट पहिले
दक्षिण सुडानमा विमान दुर्घटना हुँदा १० को मृत्यु २१ मिनेट पहिले
कपिलको शब्द संगीतमा तिमीलाई नै सार्वजनिक २२ मिनेट पहिले
भूगोल साहित्य समाजको नयाँ कार्यसमिति २८ मिनेट पहिले
दोभान आगलागीपीडितलाई अपुग सहयोग केन्द्र र प्रदेशसँग मागिने ५० मिनेट पहिले
आकासे पुल भत्काउदै महानगर २ घण्टा पहिले
पेरिसडाडाँमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन निर्देशन १९ घण्टा पहिले
सरकार र विप्लवले वार्ताका लागि समिति गठन गर्नु सकारात्मक : कांग्रेस १७ घण्टा पहिले
संघीय संसदका सदस्यहरुले बुधबार खोप लगाउने २ दिन पहिले
ऋषि धमलासँगकाे अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले बोलेको अभिव्यक्ति विवादमा, ६ पार्टी तथा संघ-संस्थाद्धारा विरोध ३ दिन पहिले
गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको मुद्दाका फरार ३ जना पक्राउ ५ दिन पहिले
ट्राफिकको व्यवहार सुधार अभियान ३ दिन पहिले
निर्माणाधिन व्यपारिक बजार केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेन १ दिन पहिले
मेलम्चीमा सुरुङको पुनः परीक्षण गर्दा अस्थायी बाँधकै प्रयोग ४ हप्ता पहिले
नेप्सेमा वाणिज्य र विकास बैंकको शेयर सूचीकृत, कुनको कति ? २२ घण्टा पहिले
आठौँ पर्वतीय खेलकूद महोत्सव स्थगित १ हप्ता पहिले
रुकुमपूर्वका कृषकलाई स्याउका बिरुवा ४ हप्ता पहिले
२ खर्ब २५ अर्ब करको भार कटौति गरिदिने २ वर्ष पहिले
उज्यालो बन्दै हलेसी तुवाचुङ नगर २ हप्ता पहिले
आन्दोलनरत किसानद्वारा माेदीको प्रस्ताव अस्वीकार, तीन वटै कानून खारेज हुनु पर्ने अडान ३ महिना पहिले
विप्लवका १७ नेता तथा कार्यकर्ता कसरी पक्राउ परे ? २ वर्ष पहिले